Roustabouts, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ် – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Roustabouts, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
Roustabouts, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကိုယောဘဖျေါပွခကျြ / ခံမှုနမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 281 views
အစွမ်းသတ္တိ, လက်ကိရိယာများအသုံးချဖို့ရေနံ-Field ထုတ်ကုန်စည်းဝေးသို့မဟုတ် fix. ကွဲပြားခြားနားသောစီမံကိန်းများကို execute asneeded.
ပိုက်ဝက်အူဖြုတ်သို့မဟုတ်တင်းကျပ်, ထည်, လိုင်းများ, နှင့်စုပ်စက်အထောက်အကူ, အစွမ်းသတ္တိကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်မီးညှပ်ပေးပါ.
ထရပ်ကားများနှင့်ကနေပိုက် Go, ပစ်ကပ်ဝန်တင်လက်လှည့်စက်ခြင်းနှင့်မော်တော်ရုတ်သိမ်းအသုံးချဖို့, သို့မဟုတ်ကလက်.
ပေါက်ကြားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စီးဆင်းမှု-လိုင်းများ Go, အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက် detectors အအလုပ်သမားများက, နှင့်ပေါက်ကြား fix.
ဖျက်သိမ်းပြီး restore ဘွိုင်လာ, oilfield စနစ်များ, နှင့်ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများ, ပါဝါကိုတူရိယာများနှင့်ထန်း tools တွေသုံးပြီး.
မေတ္တာရပ်ခံအဖြစ်ပလက်ဖောင်းခင်းဖို့ဂီယာပေး, နှင့်အကူအညီဖြင့် roughnecks ပူဇော်.
အဖွင့်ကိုရယူပါ, ထူထောင်မျိုးပေါင်း, နှင့်သစ်သို့မဟုတ်သတ္တုဒါးနှင့်စပ်လျဉ်းရိုးအမြစ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်အစစ်အမှန်ပုံစံများသို့ပေါင်းစပ်ဝတ်ပြု.
Reduce နှင့်ချုံကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်မီးလျှံအန္တရာယ်လျှော့ချဖို့စင်ကြယ်သော, ကွဲပြားလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဆိုက်များ, နှင့်က်ဘ်ဆိုက်များမှလမ်းများဘို့နည်းလမ်းကိုဖန်တီးရန်.
ဒါးစိုက်ထူဖို့စုပေါင်း Secure သို့မဟုတ်လက်သည်းသစ်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းပလက်ဖောင်း.
အခြားအ-လူတွေကအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုကိုထောက်ပံ့ဘယ်သို့ပြောသည်ကို active-နားထောင်ခြင်း-ရန်,, သငျသညျကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်အချက်များကိုနားမလည်ဖို့အတှကျအခြိနျလေးလည်း, မှန်ကန်သောအဖြစ်မေးမြန်းချက်မေးမြန်းခြင်း, အစားမသင့်လျော်ဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာ mesmerizing ထက်.
တရားသဖြင့်စီရင် Criticalthinking-အသုံးချပြီးနှင့်နည်းလမ်းများ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ထင်, အခက်အခဲများမှစိတ်ကူးများသို့မဟုတ်အစားထိုးရွေးချယ်မှုများ.
Active ကိုသင်ယူ-နားလည်ခြင်းတစ်ဦးချင်းစီကနောက်ဆုံးနှင့်အလားအလာ problemsolving နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအသစ်ကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အရေးပါမှု.
အသစ်ကဖြစ်ကြောင်းကိစ္စများကျွမ်းကျင်သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်သည့်အခါနည်းပညာ-အလုပ်သင်ယူခြင်းနှင့်ညာဘက်အခွအေနအဘို့အ instructionORtutorial နည်းစနစ်များနှင့်ကုသကောက်နေ.
အပိုဆောင်းလူများကိုစစ်ဆေးခြင်း-OverseeingPERExamining လုပ်ဆောင်ချက်ကို, မိမိကိုယ်ကို, သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကုစားလုပ်ရပ်များယူသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
သူတို့ reply ဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးနေချိန်တွင်လူမှု othersI တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အသိပညာသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်း.
othersI ခြေလှမ်းများပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ Dexter-ပြောင်းခြင်းလုပ်ရပ်များ.
စားသုံးသူလိုအပ်ချက်အစေခံရန်အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-ထူထောင် devices များသို့မဟုတ်ဖန်တီးခြင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာ.
ဂီယာရွေးချယ်ရေး-ဖော်ထုတ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများ၏မျိုးအလုပ်တစ်ခု execute ရန်လိုအပ်ခဲ့.
တပ်ဆင်နေ-Installing ဂီယာ, ထုတ်ကုန်, cabling, ယေဘုယျအားဖြင့် features တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ကြောင်းအသုံးပြုမှုများအတွက် coding-Creating ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ.
function စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအပိုဆောင်းလက္ခဏာတွေ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သို့မဟုတ်အကဲဖြတ်လက်ရှိမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ကိရိယာလည်းမရှိသေချာစေရန်.
ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် devices များ function နှင့်ထိန်းချုပ်ရေး-မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကို.
လိုအပ်သော tools တွေကိုအသုံးချဖို့ Restoring-ကိုပြုပြင်တာတွေ devices များသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များ.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-ဆောင်ရွက်ခြင်းစာမေးပွဲနှင့်ကုန်စည်စမ်းသပ်ခြင်း, ပံ့ပိုးပေး, သို့မဟုတ်နည်းစနစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မှ.
လေထုထဲတွင် analysis-ကိုစူးစမ်းရုံကိုဘယ်လိုချိန်ညှိ, လုပျထုံးလုပျနညျး, အခွအေနနှင့်အတူရလဒ်များထိခိုက်စေနိုင်ပြီး technique ကိုအဘယျသို့သောလည်ပတ်ရမယ်.
ငွေသားပြုမိ task ကိုဆည်းပူးရန်ကုန်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုချွေတာသုံးစွဲ-ဆုံးဖြတ်၏စစ်ဆင်ရေး, ဤကုန်ကျစရိတ်များအတွက်စာရင်းရေးသွင်းခြင်း.
ကုန်ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များ-ရယူနှင့် tools များ၏သင့်လျော်အသုံးချဆီသို့ဦးတည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ၏စစ်ဆင်ရေး, အဆောက်အ, အထူးသဖြင့်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ operate.
ကြီးကြပ်မှုန်ထမ်းများ၏အရင်းအမြစ်များ-အားပေးခြင်း, လေးလည်း, သူတို့အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းညွှန်, ကြောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးရှေးရှေးကိုဖျောထု.
high-ကျောင်းအဆင့် (သို့မဟုတ် GED သို့မဟုတ်အကြီးတန်းကျောင်းနှင့်ညီမျှလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး)
တည်မြဲခြင်း – 81.82%
စီမံကိန်း – 85.46%
အာဏာ – 74.79%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 89.13%
အခြားသူများအဘို့ကိစ္စ – 85.58%
ယဉ်ကျေးမှု Direction အဖွဲ့ – 81.04%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 83.22%
စိတ်ဖိစီးမှုစာနာထောက်ထားရေး – 84.45%
ယုံကြည်စိတ်ချရသော – 87.12%
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – 86.12%
ကျင့်ဝတ် – 89.25%
လွတ်လပ်ရေး – 83.84%
တိုးတက်ခြင်း – 80.43%
စဉ်းစား – 81.60%
နောက်တစ်ခု soundcloud တူသောအတူတူကြူဝါးလီတေးဂီတအသံကိုနားထောငျဖို့ကိုဘယ်လို ?
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Thermal installation နဲ့ Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / လုပ်ငန်းများနှင့်တာဝန်များနမူနာ
စုပြုံဖို့ဒီဇိုင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်မီးအစီအစဉ်များကို Install သို့မဟုတ် restore, စတိုးဆိုင်, and circulate pv-warm water for …